Kugara neInvestment yeUSA uye Golden Visa
Isu tinopa zveEconomic Immigration Services muUSA kune:
● Kugara nekudyara muUSA
● Ugari nekudyara kubva kuUSA
● Visa yegoridhe muU.SA.
● Pasipoti yepiri kubva kuUSA
● Kugara nekudyara kweUSA nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muUSA uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muU.SA uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muUSA zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri veUSA vanopa mabasa ekugara nekudyara muUSA, Kugara nehurongwa hwekudyara muUSA, Kugara nehurongwa hwekudyara muUSA, Residency yechipiri nekudyara muUSA, mbiri Residency nekudyara muUSA, ugari uye ugari nekudyara muUSA , Kugara zvechigarire nekudyara muUSA, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muUSA, Kugara nehurongwa hwekudyara muUSA, Kugara nehurongwa hwekudyara muUSA, Citizenship nekudyara muUSA, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muUSA, Citizenship nehurongwa hwekudyara muUSA, wechipiri Citizenship by investa in USA, dual Citizenship by investa in USA, residential and citizenship by investa in USA, ugari uye ugari nekudyara muUSA, hupfumi Citizenship zvirongwa muUSA, Citizenship neinvestment scheme muUSA, Citizenship neinvestment zvirongwa muUSA, chechipiri pasipoti muUSA, kechipiri pasipoti zvirongwa muUSA, yechipiri pasipoti chirongwa muUSA, mbiri yechipiri pasipoti muUSA, vanogara ncy uye wechipiri pasipoti muUSA, diplomatic yechipiri pasipoti muUSA, yechipiri pasipoti nekudyara muUSA, yechipiri ugari pasipoti muUSA, yechipiri pasipoti chirongwa muUSA, mapasipoti echirongwa eU.SA, visa yegoridhe muUSA, vhiza dzegoridhe muUSA, vhiza yegoridhe zvirongwa muU.SA, yegoridhe visa chirongwa muUSA, yechipiri vhiza vhiza muUSA, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muUSA, mbiri yegoridhe visa muUSA, ugari uye goridhe vhiza muUSA, ugari uye goridhe visa muUSA, goridhe vhiza ugari muUSA, goridhe vhiza scheme muUSA, goridhe visa zvirongwa muU.SA.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muUSA nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muUSA yeResidency nekudyara: USD 500,000 kusvika kuUS $ 1 miriyoni +
Nhanganyaya USA uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezve USA
United inoti, yakapfupikiswa US kana USA, inyika iri kuNorth America. Zvimwe kunze kwenzvimbo makumi mana neshanu dzinopindirana dzine nzvimbo yepakati penyika, United States inosanganisira dunhu reAlaska, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kunoshamisa kweNorth America, nenharaunda yechitsuwa cheHawaii, pakati pePacific Ocean.
Hunhu hwakakosha hweUnited States ingangoita hunhu hwayo hunoshamisa. Rudzi runobata chikamu cheguta guru repasirese rinotarisa senzvimbo dzese dzakapamhamha dzisingagare.
Kuvapo kwemazuva ese muU.SA kunoreva kuve nezvakawanda dzimwe nzira. Iine nzvimbo yepasi peakaderera pasi pemamirioni gumi emakiromita, USA ndiyo nyika yechitatu yakakura pasi. Ita USA imba yako nyowani uye chengetedza yako yekufungidzira chinzvimbo mune yako yaunofarira US mamiriro. Kunyangwe iwe uchitsamira kudhorobha rine ruzha kana guta rakadzikama, munhu wese anowana yavo yekufungidzira nzvimbo muUSA. Zvisiye wega uchikurudzirwa nevagari vekuUS vakasiyana: Vazhinji vanotama vanogara kupi muAmerica? Parizvino inguva yako: Ita yako chaiyo yekuAmerica kurota kuve kwechokwadi. Kadhi reGreen reUS rinovhura dzese nzira kumamiriro ezvinhu! Vatorwa vemuUS vakakuvadzwa nedanho: Ndeupi weanoshamisa makumi mashanu eUS anoti chingave zano rakanaka kuti iwe ugare mairi? America inozivikanwa nekuda kwekusiyana-siyana kwayo uye kana uchinge uchinge uriko - kungave munhu wezororo kana mudzidzi wepasi - anonzwisisa zvatiri kukurukura patinotaura kukona nekusiyana kwese kona yeUSA.
Atmospheres uye vanhu vanoshanduka paunenge uchienda kubva kumabvazuva kumahombekombe uchienda kumadokero kwegungwa. Zvisinei nekuenda kwauri kuUSA, unoita chokwadi chekusangana nevaAmerican vanozokuzivisa nemufaro nyaya yemhuri yavo. Sezvinoratidzwa neUnited States Census Bureau pakanga paine vanhu vangangosvika mamirioni makumi mana nemakumi matatu emamiriyoni ekutanga (asina kujairika akaumbwa) vanhu vaigara muUnited States muna43.1 uye vaive ne2015% yevagari vemuUS. Zvakare, ndiani anoziva, iwe unogona kunge uchingobva ipapo! Nhanho yekutanga iri kuenda kuUSA uye yechipiri iri kusarudza kwaunoda kugara.
Pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuziva usati watanga kutsvaga imba kana condo muUSA. Pakutanga, zvinobatsira muchiitiko chekuti iwe sezvino wave nebasa muchiedza chekuti danho rakakura remuripo wako rinoshandiswa pekugara muUSA. Imwe yedzakanakisa mhando dzetsamba ndeyekuwedzera imwe yezvakakurumbira pane dzakawanda nzvimbo dzeUS. Kubudikidza nekubatana kwako pamwe nekusimbiswa nzvimbo dzekushandira muAmerica, unogona kubva ikozvino unzwisise kuti kazhinji munhu wese anoshandisa email nguva zhinji sezvazvinogona.
Email neInternet zvaita kuti zvive nyore (uye kutengeka zvakanyanya) kutengesa huwandu hwedata. Paunoratidza kumusoro muAmerica, uchaona kuti maPC nemasangano eInternet anowanikwa zvechokwadi pazvikonzero zvakawanda. Muchokwadi, email inotora chikamu chakakosha muzviitiko zveveruzhinji zvevanhu vazhinji vekuAmerican - sezvavanotumira uye nekutumira mameseji kazhinji nevadiwa.
Vazhinji vane Green Card vanobata vanogara nemhuri kana shamwari pavanotanga kuenda kuUSA. Kunyangwe paine chokwadi chekuti zvinogona kufungidzirwa kutsvaga imba kana kukwirisa pawebhu (semuenzaniso usati waenda kumatunhu), zviri nyore kwazvo kuwana pekugara kana iwe uri muUSA. Zvakare, varidzi venyika vazhinji vanofanirwa kusangana nevavanogona kugara napo uye uye uye unofanirwa kuona kwaungave uchigara. Kutsvaga pekugara muUSA kunoshanda zvakanyanya kana iwe uri muUSA.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeUSA
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muUSA
USD 500,000 kusvika kuUS $ 1 miriyoni +
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye USA
Kugara nekudyara kweUSA
EB-5 Yekune imwe nyika Yekudyara chirongwa
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweUSA
Pakarepo pasi pechirongwa
Mushure memakore masere ekurarama
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veUSA
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweUSA
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweUSA
IU.SA ndiyo inodiwa kwazvo nzvimbo yekutama, zvese zvakavanzika uye zvebhizinesi zvinangwa. Iyo yekugara-ne-yekudyara chirongwa chinonzi EB-5 inobvumidza iye anenge achinyorera uye yake / mhuri yake kuti vatore kadhi girini mumwedzi 18-30, uye mushure memakore mana vawane kugara zvachose. Iwe haudiwe kuratidza chero hunyanzvi hwemitauro, ruzivo rwebhizinesi kana dzidzo, uye zvakare haudiwe kuti ugare munzvimbo yaunoisa mari. Mushure mekuva mugari iwe unogona kurarama, kushanda uye kudzidza chero mukati meUSA.
Mhuri inopinda muU.SA.
Mukushandisa kwako, unogona kusanganisira mumwe wako nevana pazasi makumi maviri nerimwe.
Kugara nehurongwa hwekudyara muUSA insite
Kutanga, iwe unofanirwa kutsvaga chirongwa chekudyara chakakodzera chirongwa chekugara, isa mari kune escrow account uye faira chikumbiro. Sarudzo inoitwa mumwedzi gumi nembiri kusvika gumi nesere. Mapurogiramu mazhinji anodzosera mari yako kana ukarambwa nechikumbiro chekugara. Mushure mekubvumidza kunyorera iwe unozopihwa vhiza uye mamiriro ako anogara ekugara mukati memwedzi 12-18. Chekupedzisira, mushure mekubata mvumo yemamiriro ezvinhu kwemakore maviri, unogona kunyorera kadhi girini.
Mari inodiwa kune USA
Iko kune mbiri sarudzo dzekudyara kwechinangwa chekugara. Unogona kudyara muRegional Center inova mikana inogamuchirwa nehurumende yekubvumirwa kutama. Iwe unofanirwa kuisa mari shoma paUS $ 2, uye gadzira angangoita gumi mikana yemabasa. Nezve sarudzo iyi haidi chero yakanangana nekutarisisa kwezuva nezuva zviitiko zvebhizinesi.
Sarudzo yechipiri ndeyekugadzira kambani nyowani inokwana US $ 1 miriyoni, kana madhora mazana mashanu emadhora munzvimbo dzinotyisa dzine huwandu hwekushaikwa kwemabasa. Iwe unofanirwa kungoshandisa vanosvika gumi vanokwanisa vashandi veUS, uye shingairira maneja kambani iwe pachako.
Iyo yekudyara inofanirwa kuchengetwa kwemakore mana mune ese maviri kesi. Kudzoka uye njodzi pane iyo investa zvinoenderana nemasimba emusika.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweUSA
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents eUSA uye Residency ne Investment Lawyers for USA inopa vatengi uye mhuri dzavo muU.SA nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuUSA, kugara nekudyara kubva kuUSA uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haangogumiri pakugara nekudyara kubva kuUSA kana Golden Visa kubva kuUSA kana ugari nekudyara kubva kuUSA kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuUSA, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu USA kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muUSA uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuUSA uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veUSA:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeUSA, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeU.SA, inokwanisika inivhesitimendi inzvimbo yekupinda kune dzimwe nyika vanokumbira kuUSA, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuUSA, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eUSA uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuUSA.
Kugara nekudyara kubva kuUSA kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muUSA kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuUSA kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuUSA kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuU.SA kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuUSA.
Goridhe visa zvirongwa muUSA kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuUSA kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuUSA kuenda ku37 Nyika.
Zvirongwa zveMabhizinesi ekupinda munyika kubva kuUSA kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweUSA kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muUSA nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muUSA, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweUSA. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muUSA vane rekodhi rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muUSA, vachitora zvakanak kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveUSA nemari yekudyara muzvivakwa muUSA.
Unoda kuziva - USA Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuUSA kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuUSA. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuUSA inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuUSA kana kuenda kuUSA, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweUSA kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeUSA uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuUSA, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuUSA isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye emhuri nhengo pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuUSA. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweUSA uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuUSA zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveUSA.
Kamwe chikumbiro chako chekugara patsva nekudyara kweUSA chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muUSA kune vanhu vataurwa pazasi kana mabhizinesi muUSA:
Residency nebasa rekudyara kuUSA hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuenda kuUSA.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveUSA hazvipi zvinopihwa zveTechnical surveillance muUSA kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuUSA.
Residency nekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga kweU.SA. hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muUSA.
Residency nerutsigiro rwekudyara for USA haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muU.SA.
Residency nebasa rekudyara kuUSA haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muUSA.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweUSA haruwanikwe kune vanhu veUSA vanoita mukutengesa, kuchengetedza muUSA, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara for USA haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa for USA hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muUSA.
Residency nebasa rekudyara mu USA haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muUSA.
Kugara Kwedu magweta muUSA haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muUSA.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veUSA neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muUSA kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muUSA.
Kugara nekudyara muUSA nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muUSA mukudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muUSA.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveUSA, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuUSA inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheUSA.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuU.SA kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuUSA
Zvakaitika Kugara nevekutsvaga mari kune veUSA uye vamiririri vepamutemo veUSA vachipa rubatsiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta uye vamiririri veUSA kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuUSA uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuUSA
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira USA, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuUSA kukatadza, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuUSA
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweUSA ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veUSA, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweUSA uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza for USA
Maitiro Ekubvumidza Kubatira kuUSA
Kwekugara kwenguva pfupi muU.SA
Permanent Residence muUSA
Embassies uye ma Consulates eUSA
Kugara neInvestment muUSA uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muUSA kune izvozvi kana zvenguva inotevera zvinodiwa.
Kana iwe urikuronga kuenda nemhuri yako kuUSA nekudyara, isu semumwe wako kuUSA, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muUSA nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuUSA, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muUSA, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veUSA vachitigadzira one-stop shop yeUSA uye 106 nyika.
"Takasimudzira makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuUSA mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweUSA nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muUS nekune dzimwe nyika.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muUSA kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muUSA yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muUSA
Chero ani investor anotamira kuUSA angangoda account yako yemabhangi muUSA uye account yebhangi yekambani muUSA, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Mari yekubhadhara muUSA
Kana iwe uchida kubvunza muU.SA, ye dhijitari yekubhadhara mhinduro muUSA kunge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muUSA kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku USA kana uchironga ku tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muUSA yekutanga pakarepo muUSA.
HR Services muUSA
Our kambani yevashandi muUSA inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muU.SA. vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeUSA
Bhizinesi foni nhare dzeUSA pamwe ne chaiwo manhamba eUSA Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muUSA
Accounting, kushingairira kwakakodzera muUSA uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muUSA
Setup bhizinesi muUSA
Mushure mekugara patsva nekudyara kuUSA, setup bhizinesi mu USA.
Isu tinopa pazasi kutaurwa IT mhinduro muUSA
Kugadzira Webhu muU.SA.
Ecommerce Kuvandudza muUSA
Webhu kuvandudza muUSA
Blockchain kuvandudza muUSA
App Kubudirira muUSA
Software Kuvandudza muUSA
Magweta e Residency neInvestment muUSA
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuUSA uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuU.SA, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuUSA ine vamiririri vekunze vanoendawo muUSA, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi yeUSA kujekesa nzira dzekudyara mhinduro kune vanhu veUSA nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuUSA inopa yakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuUSA, pamvumo yako yekugara muUSA inogamuchirwa.
Simba regweta reUSA rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muUSA. Kana iwe uri muUSA kana kuronga kushanyira USA, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuUSA kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeUSA. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weUSA.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muUSA
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muUSA?
Kugara nekudyara kuUSA, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweUSA kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUSA kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuUSA, ugaro nehurongwa hwekudyara kweUSA inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara mari kuUSA, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muUSA, kugarisana kwakanakisa nemagweta ekudyara muUSA uye kugarisana kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuUSA, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiririri vezvekudyara muUSA, uye akanakisa mafemu ekushambadzira. muU.SA.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kuUSA | Kugara nevamiriri vezvekudyara muUSA | Kugara patsva nemagweta eInvestment muUSA | Kugara nemagweta ekudyara muUSA | Kugara nevekudyara varidzi kuUSA
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muUSA?
Citizenship nekudyara kuUSA, inogona kutsanangurwa se, kuwana ugari hweUSA kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUSA kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muUSA. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuUSA, ugari nehurongwa hwekudyara kweUSA inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuUSA, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muU.SA, ugari hwakanakisisa nemagweta ekudyara muU.SA uye ugari hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kuUSA, vachishanda kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muUSA, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muUSA.
Affordable Investor yekufambisa mabasa eU.SA | Vanodhura vanopinda munyika vanokumbira muUSA | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muU.SA | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muUSA | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda kune veUSA | Affordable immigration law firms kuUSA
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muUSA?
Yechipiri pasipoti muUSA, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weUSA kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUSA kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuenda kuUSA, kechipiri pasipoti chirongwa cheUSA chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eU.SA, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muU.SA, magweta echipiri epasipoti muU.SA uye akanakisa echipiri mapasipoti vanachipangamazano kuUSA, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muU.SA, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muU.SA.
Chechipiri pasipoti masevhisi eUSA | Chechipiri pasipoti vamiririri muUSA | Yechipiri mapasipoti magweta muUSA | Yechipiri mapasipoti magweta muUSA | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuUSA
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muUSA?
Ndarama vhiza muUSA, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeUSA kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUSA kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera yegoridhe visa kuUSA, goridhe vhiza chirongwa cheUSA chakatsigirwa ne goridhe vhiza masevhisi eU.SA, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muUSA, akanakisa egoridhe vhiza magweta muUSA uye akanakisa egoridhe vhiza ma consultant eUSA, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muUSA, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muUSA.
Ndarama vhiza masevhisi eUSA | Ndarama vhiza vamiririri muUSA | Magoridhe vhiza magweta muUSA | Magoridhe vhiza magweta muUSA | Goridhe vhiza vanopa mazano kuUSA
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muUSA?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muUSA ndeyeUS $ 500,000 kusvika USD miriyoni imwe +.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuUSA yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muUSA nevamiriri muUSA vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muUSA.
Kugara nekudyara kuUSA kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuUSA uye Kugara nekudyara mari inodiwa kuUSA ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuUSA, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuUSA kana investor visa kuUSA?
Kugara nenzvimbo dzekudyara kuitira inogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuUSA kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuMalaysia, Residency nekudyara kuUSA kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuUSA kubva kuNepal, Residency nekudyara kuUSA kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuUSA kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance for USA
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuUSA
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeUSA
Federal Bureau Yekuferefeta (FBI)
Yakaenzana Employment Mukana Commission (EEOC)
Raibhurari yeNyika Yezvekurima
Federal Bureau yeMatirongo
Tennessee Valley Chiremera (TVA)
Pension Kubatsira Guaranty Corporation
Diki Bhizinesi Rekutonga (SBA)
Ehupfumi Kunotsvaga Service
Yemukati Revenue Service (IRS)
National Yekufambisa Yekuchengetedza Bhodhi (NTSB)
National Aeronautics uye Space Administration (NASA)
Yekurima Yekutsigira Service
Bhodhi reMagavhuna eFederal Reserve System
Maodzanyemba Ekumadokero Emagetsi
US Geological Ongororo (USGS)
Kubasa Kudzivirirwa & Hutano Kutungamira (OSHA)
Hurumende Yenyika Real Association (Ginnie Mae)
Institute of Museum uye raibhurari Services (IMLS)
Hofisi Yematare Zvirongwa (OJP)
Nyukiliya Regulatory Commission (NRC)
Advisory Council pamusoro Pekare nhoroondo Kuchengetedza (ACHP)
Institute of Dzidzo Sayenzi (IES)
Hove neImusango Webasa
Natural Natural Kuchengetedza Service
National Library yeDzidzo (NLE)
National Council pamusoro pekuremara
National Telecommunication uye Information Administration
Nuclear Waste technical Review Board (NWTRB)
Nyika dzakabatana Trade and Development Agency
Kwemari Matsotsi Enforcing Network (FinCEN)
Overseas Yakavanzika Investment Corporation (OPIC)
Dzidzo Ruzivo Ruzivo Center (ERIC)
Federal Laboratory Consortium yeTechnology Transfer (FLC)
Hofisi yeMutungamiriri weNational Intelligence
Kubasa Kudzivirirwa & Hutano Ongororo Commission (OSHRC)
National Nyukireya Kuchengetedzwa Kwekutonga (NNSA)
National Archives uye Rekodhi Administration (NARA)
Farm Chikwereti Kutungamira (FCA)
Broadcasting Board yeVatongi
National Endowment yehunyanzvi (NEA)
Federal mine kuchengetedzwa uye Hutano Kuongorora Commission (FMSHRC)
Wemhuka uye Zvirimwa Hutano Kuongorora Service
Kuchengetedzwa kweMugodhi uye hutano Kuronga (MSHA)
Federal Retirement Inotora Investment Board (FRTIB)
Dziviriro uye Dhivhisheni Commission (SEC)
Y-12 Yenyika Dziviriro Complex
Veruzhinji neIndia Dzimba (PIH)
Hofisi yeVashandi Management (OPM)
Hofisi yeManagement neBudget (OMB)
Hofisi yeHurumende Ethics (OGE)
Hofisi yeMumiriri weUnited States Trade Representative (USTR)
Patent uye Bhizinesi Hofisi
Consumer Chigadzirwa Chengetedzo Commission (CPSC)
National Endowment yeHumanities (NEH)
General Services Kutonga (GSA)
United States Agency yeInternational Development (USAID)
Bureau of Engraving uye Kudhinda
Sarudzo Service Service (SSS)
Dhipatimendi reHurumende Raibhurari
American Hondo Monerals Commission
Hofisi yeComptroller yeiyo Mari (OCC)
International Boundary & Mvura Commission
Hofisi yePamusoro peMining Kudzokorora uye Kusimbisa (OSMRE)
Bureau yeChokufambisa Statistics
Federal Komisheni Commission
National Chikwereti Union Administration (NCUA)
Bureau Yehupfumi Kuongorora (BEA)
United States Post Service (USPS)
Merit Systems Dziviriro Board (MSPB)
Corporation yeNational & Nharaunda Service
Izwi reAmerica (VOA)
Citizenship uye Immigration Services
Drug Enforcing Administration (DEA)
International Kutungamira Kwekutonga (ITA)
Federal Mutemo Wekusimbisa Kudzidzisa Centers
Commodity futures Commerce
Wechinzvimbo Chekuchengetera Avhavha (TSP)
Post Regulatory Commission (PRC)
Doro uye Fodya Mutero uye Bhizinesi Bureau (TTB)
Bureau yeFiscal Service
Federal Labour Relations Authority (FLRA)
Railroad Retirement Bhodhi (RRB)
Hofisi yeRot Hazard Control uye Dzimba Dzine hutano (OLHCHH)
Bureau yeDoro, Fodya, Pfuti uye Zvinoputika (ATF)
Bureau yeInternational Security uye Nonproliferation (ISN)
Inopindirana Tariff uye Trade DataWeb (Import / kutumira kunze data)
Yemagariro Kuchengetedzwa Kwekutonga (SSA)
Savannah Rwizi Site
National Labour Relations Board Board (NLRB)
National Library yeMishonga (NLM)
National Indian Mutambo weKomisheni (NIGC)
National Institutes of Hutano (NIH)
National Oceanic & Atmospheric Kutungamira (NOAA)
Federal Housing Mari Agency (FHFA)
Link to Dhipatimendi Rekupinda muU.SA , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Immigration muUSA